Edward Hopper wuxuu qaatay dareen kale oo weyn maalmahaan coronavirus | Abuurista khadka tooska ah
Rinjiyeynta Hopper waxay leedahay macno weyn xilligii coronavirus
Edward Hopper waa farshaxan jilaha sheekada taas, haddii ay horeba il ugu ahayd dhiirrigeliyayaasha filim sameeyayaasha iyo mid ka mid ah wakiillada ugu waaweynaa qarnigii XNUMXaad, hadda waxay qaadanaysaa macno kale oo muhiimad weyn leh oo la xiriirta maalmaha ay tahay inaan ku noolaano xilligii coronavirus.
Sus muuqaalka magaalooyinka cidla ah iyo tirooyinka cidlada ah Waxay matalayaan sida qofna sawiradaas oo ah inay arkeen dad badan oo ka sacbinaya daaqadaha, laakiin murugada ay ka qabaan midba midka kale.
Sida qaar horey u yiraahdeen, hadda oo dhan waxaan mataleynaa sawirka Hopper. Midba midka kale wuxuu ka fogyahay sida haweeneyda "Subaxdii Qorrax" fadhiya sariirteeda iyadoo eegeysa daaqadda, ama mid kale oo daaqadda ka daawanaya isla muujinta.
Waan sii wadi karnaa inaan ku sifeyno qaar badan oo ka mid ah sawirradiisa sida shaqaalaha dukaanka cidlo ah, haweeney kaligeed ku jirta tiyaatarka filimada ama dadka ku kala maqnaa miisaska makhaayada. Muuqaallada matalaya mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu xun ee cudurkan faafa ee baabi'inaya xiriirka tooska ah ee dadka.
Waa si hufan waxa uu Hopper na baray shaqooyinkiisa sawirada ah. Rinjiyeye ku dhashay magaalada New York sanadkii 1882 iyo yaa kalinimo ka dhigtay shaqadiisa. Hopper sidoo kale wuxuu nooga tagayaa jawaabta haddii xorriyadeena laga qaado waqtiyada casriga ah, kelinimada ayaa naga tagaysa.
Kalinimo aan u maleynayno inaan baranno sida loo qiimeeyo saami ahaan si aan ula qabsano shirkad qof aanan aqoon, oo ku eegta indho qariib ah ama isku soo duubid lama filaan ah oo qof nagu soo biiro anaga oo aan raadin wax aan ka aheyn aadanaha. Hopper ayaa aragti kale naga siinaya shaqadiisa Waqtiyadaan coronavirus iyo faafa oo nagu qasabtay inaan kujirno gurigeena sida qalcadda. Ha moogaan tan koorso bilaash ah oo ku saabsan Hopper oo ka socota Matxafka Thyssen.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Fanaaniin » Rinjiyeynta Hopper waxay leedahay macno weyn xilligii coronavirus
La shaqee midab leh Adobe Color
Koorso khadka tooska ah oo bilaash ah oo laga helo Matxafka Thyssen: Edward Hopper, shineemo iyo nolol casri ah